रातो आतंक- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
श्रावण १४, २०७४ कुमारी लामा
प्रत्येक महिना रातो आतंक विस्फोट हुन्छ उनको स्वतन्त्र आकाशमा । त्यसपछि ऊ एउटा कुना, नाघ्न नमिल्ने निश्चित घेरा या एउटा गोठमा थन्किन्छे । भनिन्छ, रातो शुभ, रातो जीवन, रातो ऊर्जा, रातो सपनाको रंग हो ।
रातो रगतको रंग । तर उही रातो बनिदिन्छ संशय, ग्लानि, अभर अनि पीडा । हरपल आफ्नै नसामा दौडिरहने रगतले नै फैल्याउँछ भयंकर आतंक ।
रातो... रगतको यानिकी रजस्वलाको आतंक ।
रातो, पीडाको रंग ।
छरपस्ट छन् पत्रिकाका पृष्ट भरि–भरि समाचार बनेका तुलसा शाही र कृष्णकला विकहरू । कारण, प्राकृतिक महिने चक्र, रजस्वला । कोही सास छुटेपछि त कोही सास हुँदै बन्छन् समाचार । केवल समाचार उनीहरू । पुरातन रुढीवादी सोचको तावामा डामिएर कठैबरा बनाइएका समाचारहरू । रजस्वालाजस्तो प्राकृतिक कुराका लागि पनि कलिला किशोरीहरूलाई अपराधीझैँ अलग्ग राखेर अनेकन जोखिमको सामना गर्न बाध्य पारिन्छन् ।
प्रत्येक महिनाले दिने शारीरिक असहजता त छँदै छ त्यसमा पनि थोपरिन्छ मानसिक पीडा । सुदूरपश्चिमतिरका ढल्दै उठ्दै गरेका छाउगोठ व्याप्त गाउँहरूमा मात्र हैन सहरका धेरै घरहरूमा प्रत्येक महिना कोरिन्छ एउटा निश्चित घेरा र थमाइन्छ छुट्टै प्लेट, कचौरा र गिलास । अलग हालिन्छ पानी त्यस ग्लासमा उसको लागि । सुकेपछि मात्र ती भाडाले प्रवेश पाउँछन् फेरि भान्सामा । चार दिन यही प्रक्रिया चलिबस्छ क्रमिक रूपमा । क्या पीडा । यही प्रक्रियाबाट लामो समय गुज्रिसकेपछि बनेको मानसिकता यति जब्बर हँुदो रहेछ कि सबै कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि अब ऊ आफैं ती सीमाहरू पार गर्न मन गर्दिन ।
एउटी मित्र छिन् जसको घरमा उनको रजस्वालाको समयमा पुग्दा निकै निराशा फैलिन्छ मभित्र । पढालेखा, जागिरे, आफ्नो अस्तित्व र स्वतन्त्रताप्रति सजग उनी प्रत्येक महिना केही दिन यसैगरी सीमामा बाँधिन्छिन् । खाएर पखाली ढोकाछेउ घोप्ट्याएको उनको प्लेट र ग्लासले खिसी गरेझैं लाग्छ उनको अस्तित्व चेतको बुलन्द अभिव्यक्तिलाई । एकपटक घरमा पानी सारिदिने कोही नहुँदा पसलबाट किनेर पिएको कुरा उनले सहजै बताउँदै गर्दा ममा भने असहजतापूर्ण औडाहा मडारिएको थियो । आखिर किन ?
केही नराम्रो हुन्छ कि भन्ने डर लाग्छ । उनी भन्छिन्—
म अवाक हुन्छु ।
डर, त्यसमा पनि धर्मसँग जोडिएको कतिसम्म कडा हुँदो रहेछ, मैले त्यसबखत महसुस गरेकी हुँ ।
छाउगोठमा नबसे देउता रिसाउने कुराले सुदूरपश्चिमा पिरोलिनु कुन ठूलो बात भयो त ।
रातो, संशयको रंग ।
क्यालेन्डरमा चिनो लाएको मिति नाघेपछि फैलिन्छ कालो शंका । ऊ आफू र समग्र महिलाहरूको स्वतन्त्रता र अस्तित्वको वकालत गरिहिँड्ने एक सजग महिला । तर प्रत्येक महिना बिताइसँगै फरक आतंकले डेरा जमाउँछ ऊभित्र । शंकैशंकाको जातोले पिँधिन्छे, घाइते हुन्छे, रन्थनिन्छे अनि अन्तत: दिनहरू कुर्न थाल्छे । एक दिन, दुई दिन, तीन दिन अनि त्यसपछि उसको शंकाले भयको रूप लिन्छ । किन त्यो देखिनुपर्ने रातो चीज देखिएन ? कतै... अनि केलाउन थाल्छे अघिल्लो महिनाको घटना । कतै त्यो (अ)घोषित प्रेमीसँगको... केही गड्बडी त भएन ? (स्वतन्त्रता र अस्तित्वको पक्षधर धेरै महिलाको भोगाइ यस्तो हुन सक्छ ।)
उनी मधुरो अनुहार लिएर देखा परिन् । समस्या रहेछ हप्ता कटिसक्दा पनि ‘पिरियड’ नहुनु । म उनको शंकाको घाउमा अलिकति मह्लम लाउने डाक्टरी भाषा बोलिदिन्छु । हप्ता–दस दिन त ‘न्याचुरल’ हो नि । उनी अलिकति आश्वस्त भएजस्तो गर्छिन् । तर त्यो हप्तापछिको केही दिन कुर्नु पक्कै दस जुनी हुनेछ उनलाई ।
(प्रत्येक सेकेन्डको ढुक्कुकी छाम्नु, ट्वाइलेट जाँदैपिच्छे भइ पो हाल्छ कि भनी आशाले हेर्नु अनि भोलि बिहान त पक्का हुन्छ भनी मनलाई थप्थपाउँदै निदाउनु उसको केही दिने रुटिन बन्छ । दुई दिनमै उनको पहिलेको मानसिकतामा कायापलट हुन्छ । ऊ सुटुक्कै आफ्नो स्वतन्त्रतामा मख्ख भई विचरण गर्ने आत्मनिर्भर महिलाबाट ग्लानि र शंकाले गलेकी निरीह स्वास्नी मानिस बनिसक्छे )
केही दिनपछि उनी उज्यालो अनुहार बोकेर झुल्किइन् । अनुहारको चमकबाटै बुझिगएँ उनलाई पिरियड भएछ । हो रैछ । अनि सुनाउन थालिन् केही दिनसम्म लगातार उनको मनमा परेको चट्याङको इतिवृत्ति । उनले भ्याएछिन् सोच्न परिवारको इज्जत, नाता–गोताको कुरा कटाइ, साथीभाइको कानेखुसीदेखि आफू पल्टिरहेको मेरिस्टोप्सको एक कुना पनि । (पिरियड केही दिन ढिला हुँदैमा उनीभित्र उर्लिएका तनावका अनगिन्ती छालहरूका पछाडि हाम्रो समाजको समग्र मानसिकता हावी छ ।
धेरै महिलाको हकमा यी र यस्ता मनस्थिति निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुन् । त्यही मासिकस्राव एकातिर छाउगोठको पीडा भएर उभिदिन्छ सुदूरपश्चिमका प्रत्येक युवतीको मनमा भने अर्कोतिर कहिलेकाहींको गडबडले यातनाको बज्रपात गरिजान्छ कैयौँ ऊर्जाशील युवतीहरूको मस्तिष्कमा । त्यसैले होला उनीहरू बिस्तारै आफू साँच्चै नै कर्मले ठगिएको जातको भएको स्विकार्न थाल्छन् ।
रातो, स्वतन्त्रताको रंग ।
रातो विद्रोह र जीवनको रंग । तर अधिकांश नेपाली महिलाहरूको हकमा भने रातो भयको रंग भइदिन्छ । खासमा यही महिने चक्र नै महिला हुनुको विशिष्ट पहिचान र सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमताको उद्घोष हो । रजस्वला र पाठेघरको शक्ति महिलाको विशेषता र शक्तिको विम्ब पनि हो । संसारभरका सचेत महिलाहरूको बुलन्द आवाजमा पनि यही प्राकृतिक गुणको भयंकर व्याख्या विश्लेषण समेटिने गरेको छ ।
तर हाम्रो समाजमा त महिनावारी हुनुको पनि एक खाले पीडा छ भने झन् अविवाहितको महिनावारी रोकिनु त सामाजिक मान्यताको जग नै हल्लाइदिने महाभूकम्प भइदिन्छ । अविवाहित छोरी गर्भवती भइन् भने त परिवारको मात्र नभई गाउँकै इज्जतको पनि स्वाहा भइजाने डर हुन्छ । आफ्नो स्वतन्त्रताको उपभोगका कारण मात्र नभई अनेकन अप्रत्यासित घटनाका सिकार भएर पनि गर्भ बोकेका हुन सक्छन् । तर समाजले त्यो देख्दैन । हाम्रो समाजले कति सजिलै पीडितहरूलाई कि त गाउँ निकाला गर्न तम्सिन्छ कि त आत्महत्याका लागि डोरी अघिल्तिर सारिदिन्छ । भोजपुरकी ती बालिकाको पीडाको मूकदर्शक हुने समाजका सदस्य हांै हामी । (बलात्कारका कारण गर्भवती भएकी ती बालिका गाउँबाट लखेटिएकी छन् ।)
राष्ट्रिय दैनिकहरूले लेखेको लेखै छन् बलात्कार र छाउगोठमा भएका घटनाहरू । सरकार प्रमुखसम्मको नजर पुगेको देखिन्छ यी विषयहरूमा । केही सचेत वर्ग पनि पछि परेका छैनन्, यस्ता विषयहरूमा पत्रपत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जालमा लेख्न र अनेकन बहसहरूमा उत्रन पनि ।
तर कहाँनिर चुकेका छौँ हामी ? किन हाम्रो समाज निरन्तरता दिइबस्छ यस्तै रुढी मान्यतालाई र साक्षी भइबस्छ अनेकन अमानवीय घटनाहरूको ?
फेरि पनि किन यतिबिघ्न धारिलो भइबसेको छ यो रातो आतंक ?
बहस–बहसकै खातिर कि समाज परिवर्तनका निम्ति ?
हाम्रा बौद्धिक विलासले समाजलाई कत्तिको परिवर्तन गरेको छ ?
मैले पत्रिकामा लेख्ने टुक्रे लेखको अर्थ के ?
यस्तै अनेक प्रश्नहरूको झटारो बेहोरिहेको छु यतिखेर ।
दिनानुदिन केही न केही यस्ता घटनाहरू सम्प्रेषित भएका छन् सञ्चारमाध्यममा । छाउ नबारे देउता रिसाउने ठाउँकै डा. अरुणा उप्रेतीले पहिलोपटक छाउ हुँदा कसैलाई नभनी सबैतिर छोइहिँड्दा पनि केही नभएको प्रसंग बारम्बार आफ्नो लेखमा लेखेकै छिन् । लेखक रामेश्वरी पन्तले लामो समयदेखि परम्परा, धर्म र महिला जोडिएका पेचिला लेखहरू निरन्तर लेखिरहेकै छिन् । तर समाज विशेषत: धर्म र परम्पराका कुराबाट टसमस हुन सकेको स्थिति छैन । ताज्जुब यही छ ।
झलक सुवेदीको समाज विश्लेषण सही लाग्छ । केहीअघिको ‘नयाँ पत्रिका’ को लेखमा उनी भन्छन्, ‘नेपाली समाज परम्परा र धर्मका नाममा महिलाको शरीरमाथि नियन्त्रण चाहन्छ । महिलाको शरीरका नियमित जैविक प्रक्रियालाई समेत पुरुषभन्दा भिन्न र कमजोर या सीमाबद्ध देखाएर उनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने परिपञ्च युगौँदेखि जारी छ ।’
निश्चय नै हाम्रोजस्तो परम्परावादी समाजको ग्रान्ड डिजाइन नै हो परम्परागत मूल्य मान्यताको नाममा महिलामाथिको नियन्त्रण । धर्म र पापको डर देखाएर महिलाहरूलाई एउटा निश्चित परिधिमा बाँधिराखेकै हो । र, उही हतियार प्रयोग गरेर उनीहरूलाई हीनताबोधको खाडलबाट माथि उक्लिन नदिएकै हो ।
पुरातनवादी पितृसत्तात्मक सोचका हिमायतीहरू अझ पनि महिलालाई नै दोषी करार गर्न पछि पर्दैनन् । उनीहरू निर्धक्कै पोखिहिँड्छन्, महिलाहरू नै परिवर्तन हुन सक्दैनन्जस्ता ‘क्लिसे’ भनाइहरू । अनेकन बहानामा महिलामाथि नियन्त्रण गरी आफ्नो शासकीय वर्चस्व कायम गरी बसेकाहरू किन डराउँदा हुन् सिक्काको अर्को पाटो नियाल्न ? किन बुझपचाई बस्दै छन् कि महिलाहरूको समग्र मानसिकताको निर्माणमा सामन्ती पितृसत्तात्मक समाजकै हात छ भन्ने कुरा ?
महिलाहरूलाई धर्म, संस्कृति, परम्परा, सामाजिक मान्यतालगायतका नेलहरू ठोकेर हलचल गर्न नसक्ने स्थितिमा राखेको कुरा के कोरा कल्पना मात्र हुन् ?
लामो समयदेखि बोक्दै आएको मानसिकतालाई फुत्तै फाल्न सजिलो नहुन सक्छ ती महिलाहरूलाई । अझै पनि धेरै महिला त्यस्ता केही मानिआएका मान्यताहरूका अदृश्य सिक्रीहरूले कँसिएकै छन् । एकखाले भय उनीहरूभित्र झ्यांगिएको छ । यस्तो जब्बर आम मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कुरा पत्रिकाले छाप्ने केही खबर या केही लेखहरूको भरमा सम्भव छैन ।
विडम्बना यो छ कि, छउपडीजस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि आइमाईका कुरा त हुन् भनी समाजको ठूलो बौद्धिक जमातले खास चासो दिएजस्तो देखिन्न । महिलाहरूले उठाइरहेको बहस र लेखिरहेका लेखहरूलाई पनि कतिले त आइमाईहरूको रोइलो भन्नेसम्म सुनिन्छ । किशोरीहरूको कलिलो मानसिकतामा नकारात्मक असर पार्ने साथै ज्यानकै असुरक्षा बेहोर्नुपर्ने यस्ता रुढीवादी चलनविरुद्ध आवाज उठाउन अब सबै तह–तप्काका बौद्धिक वर्ग, समाज, राज्य संयन्त्र सम्पूर्णको संवेदनशीलता र सहकार्य आवश्यक छ । रातो आतंकको सेतो निकास जरुरी छ ।
प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ १०:१६
सम्झना : नेपथ्यमा गुन्जिरहने एउटा धून...
असार १०, २०७४ कुमारी लामा
सम्झना भन्नु नै कुटुकुटु मुटु दुखाइरहने बिरामी पो हो कि ।यस्तै सम्झनाहरूको लस्करले ऐँठन पार्दा बेहाल भइबस्थ्यो उनको मन । आँसु । साथ दिनुपर्ने हो आँसुले तर त्यही पनि तुरिए पछि के लागोस् । सुक्खा आँखा र चिराचिरा मन उसै उसै उराठिएर चर्किन्छ ।
सम्झना भन्नु नै कुटुकुटु मुटु दुखाइरहने बिरामी पो हो कि ।
यस्तै सम्झनाहरूको लस्करले ऐँठन पार्दा बेहाल भइबस्थ्यो उनको मन । आँसु । साथ दिनुपर्ने हो आँसुले तर त्यही पनि तुरिए पछि के लागोस् । सुक्खा आँखा र चिराचिरा मन उसै उसै उराठिएर चर्किन्छ । अनि निस्किन्छन् शब्दहरू—
कहिलेकाहीँ भावुकतावश पनि छचल्किने
कहिलेकाहीँ विरह र व्यथामा पनि रसाउने
एकान्तको साथीसरि आँसु थिए आँखाभरि
थाहा नपाई ती पनि सकिएछन् ।
(आँसु सकिएपछि, कृष्णभूषण वल)
विराटनगर बसेर काठमाडांै थर्काउने कवि कृष्णभूषण वल । एक विद्रोही चेतले ओतप्रोत मस्तिष्क साथै अनुभूतिको गहिराइमा डुबुल्की मारिदिने उनका भावनाहरूले म कायल भएकी छु । पीडा, हो त्यही पीडा हो जसले लखेटिरहने रहेछ सबैलाई जीवनभर । पीडा त्यही पनि कसैलाई गुमाउनुको पीडा बहुतै गह्रौं हुन्छ । त्यसमा पनि अझ आमालाई गुमाउनु बाल्यकालमै, कति नमीठो । कृष्णभूषणको भागमा त्यही पर्‍यो । उनी जीवनभर आमाको न्यानो काख र बात्सल्यका भोका बने । आमाको माया एक अद्भुत रहस्य बनी बस्यो उनको मनमा, जीवनमा ।
कृष्णभूषणले सग्लो जीवन बाँची गए । दु:ख, सुख, सफलता, हन्डर, ठक्कर, रक्सीको नशा, अनि निराशा सबै बेहोरे । तर अब त उनी उनकै सिर्जनाका पन्नाहरूमा कैदी भइगए । सायद रहलपहल यादमा रहेका होलान् उनकै समकालीनहरूको । बेलाबखत बुर्कुसी मार्दो हो उनीसँगका आत्मीय समय गणेश रसिकका सम्झनाहरूमा तब त लेखिदिन्छन् सुदूर सम्झनाका केही फेहरिस्त । रसिकले जस्तै सम्झना संगालिबसेकाहरू अरूले पनि लेख्दा हुन् (अथवा मात्र सम्झँदा हुन्) उनलाई । बस् ! जीवन के पो रहेछ र ! मात्र अल्झिनु केही अक्षरहरूमा, केही सम्झनाका तुवाँले तरेलीहरूमा या रहनु आफन्तले सँगालेको फोटो एल्बममा ।
उनलाई सम्झिन मन भयो । एकदम टालटुले सम्झना भनूँ । ‘कृष्णभूषण वलका बाँकी रचना’ नामक पुस्तक गणेश रसिक दाइसँग सापटी लिएपछि थोरबहुत बुझेकी हुँ उनलाई । पढ्दै जाँदा मन पग्लिँदै गयो । थक्थक् लागिबस्यो, कम्तीमा एकपटक त भेट जुर्नु नि... कस्तो बोर, कहिल्यै भेट भएन । उनी नभएको थाहा पाएपछि अझ बढी उनी सम्झनामा आइबसे । आज केही लेख्न लाग्दै छु । कहिले देखभेट नभएको मानिसकाबारे लेख्नु एकखाले रोमाञ्चक यात्राजस्तो हुँदो रैछ । अलिकति ‘रिस्की’ पनि । तर त्यही खतराको बाटो आज हिँडिदिऊँ लाग्यो । मेरो मनले दिन खोजेको भर्पाई हुँदो हो यो लेखाइ । या उनको सम्झना ताजा पार्ने एक उपाय ।
अघि नै भनिगएँ, उनी पूर्वबाट राजधानीलाई हाँक दिने कवि तर फेरि भावुकताले पग्लिजाने कवि पनि । उनका कविता र संस्मरणहरू पढ्दा उनी गज्जबका प्राणी लाग्छन् । भावुकताले ओतप्रोत छन् एक कृषणभूषण जो आमाको सम्झना, गाउँघरको सम्झनामा भावविभोर भइबस्छन् । अलि पिन्चेपिन्चे लाग्छन् । खोजी छ आमाको मायाको । उनलाई आमाको झझल्को यसरी आउँछ:
चोलो चौबन्दी, बर्को सेतो
सारी थियो खाँडीको
ढाडमा थुन्चे, पटुकामा खुरुम्बी
तुनामा फूल गुराँसको
आँखा रसिला तर्तर् पसिना
सायद जाँदै थिइन् माइती
एकै झल्को देखेँ झन्न बोलाएँ
थियो उनमा मेरे आमाको आकृति ।
(झझल्को मेरी आमाको)
अनि अर्का छन् भयंकर विद्रोही कृष्णभूषण । समाजमा विद्यमान अन्याय, भ्रष्टाचार, बेथिति र निरंकुश शासन व्यवस्थाका विरुद्ध कडा उत्रन्छन् उनी । उनका कविताहरू विद्रोहको लप्का ओकल्छन् । खबरदारी गरिबस्छन् सत्तासीन र केन्द्रमा मख्ख भइबसेका शक्ति पिपासुहरूलाई । आज हामी जुन विषयहरूमा घोत्लिरहका छौँ, केन्द्र र मोफसल, सीमान्तकृत र शक्तिकेन्द्र, निरंकुशता र स्वतन्त्रता, उही विषयमा चर्को कविताहरू लेखिसकेका छन् उनले विसं २०४१ सालतिरै कवितासंग्रह भोलि बास्ने बिहानमा । उनको समयचेत आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । आज पनि केन्द्रको हेपाहा प्रवृत्ति र सीमान्तकृतको पीडा उस्तै छ । त्यसैले आज पनि खबरदारीका स्वरहरू गुन्जिरहेका छन् साहित्य, कला र संगीतहरूमा । उनले त्यसै बखत केन्द्रलाई यसरी चुनौती दिएका थिए—
काठमाण्डु एक्लैले अब काठमाण्डु बोक्न सक्क्तैन
काठमाण्डु एक्लैले अब सिङ्गै नेपालको अर्थ लाउन सक्दैन
नाघ्नुपर्छ पाइतलाहरूले अब भञ्ज्याङहरू,
टेक्नुपर्छ आँखाहरूले अब सारा पहाडहरू,
उड्नुपर्छ निश्चित लक्ष्यहरूमा अब यो छिमलका चराहरू
ज्वालामुखीझैँ फुट्नुपर्छ अब यो पिँढीका स्वरहरू
(काडमाण्डु एक्लैले अब काठमाण्डु बोक्न सक्दैन)
उनी प्रत्येक युगका नेता, सामन्त, शक्तिपीठका मठाधीश, भ्रष्टाचारी, दुराचारीहरूलाई होसियार भन्छन् एकातिर भने अर्काेतिर जुत्ता पलिस गर्नेलगायतका मजदुर वर्ग जो सधैँ बेवास्तामा छन्, जो शिर निहुराएरै एउटा जीवन टुङ्ग्याउँछन्, उनका पक्षमा लेख्छन् आफ्ना कविताहरूमा ।
इलामको माल्टेनीमा जन्मिएका उनले यायावरी बाल्यकाल बिताए । कहिले मावल, कहिले ठुलीआमाकोमा बस्दै लेखाइ–पढाइमा लागे । गुरुको घरधन्दा सघाएरै भए पनि पढ्नलाई भने निरन्तरता दिइबसे । पुलिसमा भर्ती भई असई पनि भए तर के सनकले सक्सक्यायो, छाडिदिए । राष्ट्र बैंकमा जागिरे भए त्यसपछि । जीवनमा उत्तिसारो पैसाको अभावै भएजस्तो त लाग्दैन उनलाई । एउटा ठीकठाकको जिन्दगी बाँचे । सहरे भएपछि पनि उनलाई गाउँघरको मायाले हुरुक्क पार्न छाडेन । उनले खेली हिँडेको गाउँघर कहिले ओझेल भएन उनको मनबाट । तब न कवितामा लेखिबसे उही छाडी हिँडेका बाटाहरू, खेत खलियानहरू ।
मनमा सधैँ घोचिबस्ने केही छ उनको । निराशा छ व्यापक उनीभित्र । उनका लेखहरू पढ्दा, संस्मरणहरूमा पनि यस्तै केही संकेत देखिन्छ । उनलाई त केवल उनका रचनाहरूमा बुझ्छु म या बुझ्ने प्रयाससम्म गर्दै छु । एक्लोपन र मृत्युका कुराहरू बहुत् मार्मिक छन् उनका लेखहरूमा । जीवनका पछिल्लो समयमा उनी लेख्न नसकेको पीडाले पनि ग्रस्त देखिन्छन् । सायद आफ्नै पियक्कड बानीले पनि उनलाई अलिकति पोलेको छ । उनी कन्फेसनमै उत्रिन्छन् कवितामा । आफैंप्रति व्यंग्य, आफ्नै गल्ती र कमजोरीप्रति एक छिन अडिएर सोचेजस्तो गर्छन् । आफैंलाई शालीन आदेश पनि दिन्छन्—
कतिपल्ट घाम तुहायौँ, कतिपल्ट जून तुहायौँ
हररात क्षयसँग बात मारिरहेछौँ
हररात मृत्युसँग बात मारिरहेछौँ
हररात रक्सीसँग बात मारिरहेछौँ
जे भयो भैगयो
अब चाहिँ सोच्नुपर्ला भूषणजी ।
(आज त बिसाउँm होला थापाजी)
धेरै कुराले गाँजेको छ उनलाई । सायद क्षयोन्मुख सिर्जना कर्म, झ्याङ्गिँदै गएको एक्लोपना, मृत्युको भय, सायद जीवनमा भएका केही कमजोरी गल्तीले दिएको ग्लानि या त्यस्तै केही । उनी दोधार–दोधार लाग्छन् । उनी विचलितझैँ बुझिन्छन् । उनी बारम्बार ठोक्किन पुग्छन् निराशा र एक्लोपनतिरै । अनि पोखिन्छन् यसरी—
एक्लै छु एक्लोपनमा एक्लै छु, हिजोसम्म मञ्जिल थिए, प्रकाश छोरा थिए, उनीहरू गएपछिका रातहरू कठिन भए, अत्यासलाग्दा भए कति रातहरू अझै मातिए...
हेर्नु नि बारम्बार खोकी चलेर बाक्लो खकार, बाथरुमको बास बेसिनमा खोक्दै पोख्दै छु । पछि बूढो भएपछि बाथरुमसम्म जान पनि सक्दिनँ होला । एक्कासि मृत्यु बोझ हुन्छु... बरु आजै भए हुन्थ्यो ।
(पृष्ठ ८८, कृष्णभूषण वलका बाँकी रचना)
यी हरफहरू पढ्दै गर्दा एकपटक त भक्कानिएँ म । कसरी गल्दो रैछ समय र परिस्थितिसँगै एउटा मानिस । उफ् ! उनी एक उदाहरण बने । ज्वालामुखीजस्तो विस्फोट हुने कवि आज जीवनसँग निराश छ । मृत्युको भय पनि साथै चाह पनि गर्छ ऊ । चाहन्छ होला चाँडै छुट्कारा यी सारा घोच्ने काँडाहरूबाट । देखिने काँडा त झिक्न सकिन्थ्यो तर नदेखिनेलाई गर्नु के सिवाय सहनु ।
एक जोसिला कवि, एक कर्मचारी, एकेडेमीका प्राज्ञ, देशले मानेको एक लेखक बिस्तारै डुब्दै जान्छन् आफ्नै निराशाको भुमरीमा । जीवन टुङ्गिन्छ । मृत्यु स्वयंभन्दा पनि त्यसको भय र निराशाले मान्छेलाई चाँडो सिध्याउँछ कि जस्तो लाग्छ ।
लामो समय उनको सामीप्यमा रहेका डा. गोविन्दराज भट्टराई थक्थकाउँछन्—
विसं २०६९ सालको असार २२ गते तोकिएको २६औँ प्रज्ञा सभामा भेट गरौँला भन्ने कुरो थियो । तर एक हप्ताअघि नै उहाँको शोक मनाउनुपर्‍यो ।
(पृष्ठ ११०, कृष्णभूषण वलका बाँकी रचना)
मेरो भागको पीडा त अझ कडा छ । जीवनमा कहिल्यै भेट नै पो हुन पाएन उनीसँग । उनी त मात्र नेपथ्यमा गुन्जिरहने एउटा धून भएका छन् मेरा लागि । उनलाई बुझ्ने कोसिससम्म गरिरहेकी छु उनकै सिर्जनाहरूबाट । उनी विद्रोहको चर्को आवाज साथै भावुकताका कमलो महसुस भएका छन् मेरा लागि ।
नमन आफ्नै कविताजस्तै जीवन बाँचेका तिमी कविलाई । जीवनको गहिराइ छामेका तिम्रै यी शब्दहरूसँगै छुट्टिन्छु है आजलाई ।
जब फूलहरू वसन्तमा खेल्छन्
म अन्तै कतै डुलेको हुन्छु
के अर्थ । सानो यो, जिन्दगीको
म ओइली झर्न, पनि त सक्छु ।
(किन म त्यसै)
प्रकाशित : असार १०, २०७४ १०:३२
बिना थिङ तामाङ असार ४, २०७६